Budata SlimBrowser maka Windows
Free Budata maka Windows (3.90 MB)
SlimBrowser nwere usoro dị mfe ma e jiri ya na ihe nchọgharị ịntanetị ndị ọzọ. Notu aka ahụ, SlimBrowser, nke nwere ntakịrị karịa ihe nchọgharị ịntanetị ndị ọzọ, na-enye gị ohere ịchọgharị na ịntanetị na ngwa ngwa na nchekwa.
SlimBrowser meghere ngwa ngwa, yana elele nke ịbụ mmemme na-arụ ọrụ nke ọma na Windows.
SlimBrowser, nke gunyere atụmatụ nke ọtụtụ ihe nchọgharị, na-enye ohere ịhazi na nhọrọ ọ na-enye ndị ọrụ ya. Ọ bụrụ na-ịchọrọ, ịnwere ike itinye isiokwu na ihe nchọgharị ahụ na ngwaahịa a, dịka na ihe nchọgharị Firefox.
Mara: Iji ihe nchọgharị intaneti SlimBrowser dị na English, họrọ naanị asụsụ English na taabụ Interface Language na ngalaba Asụsụ nke mmemme ahụ.
Atụmatụ nke ụdị ọhụrụ ahụ:
Agbakwunyere mwekota na VirusTotal online nyocha. Iji nyochaa saịtị dị ugbu a, soro Ngwaọrụ / Nche / Nyocha na nhọrọ VirusTotal. I nwekwara ike ime nke a site na ịpị aka nri na njikọ nke ibe dị ugbu a ma họrọ I Scomi na VirusTotal.
Tụkwasị menu iji gosipụta saịtị ndị gara eleta. You nwere ike ịnweta menu a site na ngalaba Njikwa / Ebe nleta kachasị eleta.
Agbakwunyere menu iji hụ ọkacha mmasị ka agbakwunyere. Cannwere ike ịnweta menu a site na Ọkacha mmasị / Ọkacha mmasị ndị agbakwunyere.
Etinye menu iji gosiputa otutu oji nleta. Can nwere ike ịnweta menu a site na Ndenye jupụta / Kachasị ụdị ụdị.
Nha faịlụ: 3.90 MB